सुत्नुअघि मोजाभित्र प्याज राख्नुस्, हुन्छ यस्तो नसोचेको फाईदा ! - Deshko News Deshko News सुत्नुअघि मोजाभित्र प्याज राख्नुस्, हुन्छ यस्तो नसोचेको फाईदा ! - Deshko News
राति सुत्दा प्याज मोजामा राखेर सुत्ने कुरा तपाईले यसअघि सुन्नुभएको थियो होला । यसो गर्नाले स्वास्थ्यका हिसावमा धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यसका केही वैज्ञानिक कराण पनि रहेका छन् । जस्तो कि पैतालामा विभिन्न प्रकारका नशा रहेका हुन्छन् ।
अर्गानिक प्याज सेता वा रातो प्याजलाई गोलो पारेर काट्नुहोस् । अर्गानिक प्याज सजिलै तपाईंको रगतमा प्रवेश गर्दछ । प्याजको प्राकृतिक चिकित्सा शक्तिले तपाईंको छालाको माध्यमबाट काम गरेर रगतलाई शुद्ध गर्दछ, ब्याक्टेरिया र किटाणुलाई मार्ने र विषाक्त पदार्थलाई अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ ।
यसलाई कोठाको हावा शुद्ध गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्याजमा एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी वायरल गुण हुन्छ । दिनभरी हिँड्दा र माटोको सम्पर्कमा आएपछि पसिनाका कारण खुट्टामा थुप्रै किटाणु टाँसिएका हुन्छन् जसको सफाइएमा हाम्रो ध्यान जाँदैन ।
त्यसकारण पैतालामा प्याज रगड्दा ब्याक्टेरिया र किटाणु नष्ट हुन्छन् । रगत अशुद्ध हुने गरेका कारण हामी विरामी पर्ने गरेका छौं । प्याजमा फस्फोरिक एसिड हुने भएकाले यो छालाको माध्यम हुँदै रगतलाई शुद्ध पार्न मद्दत गर्दछ ।
डा. दिनेश बाँस्तोला यौनप्रतिको दृष्टिकोण पुस्तौँपुस्ता एकै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन। समयको परिवर्तनसँगै एक
गगन थापालाई जित्ने नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको योजना
काठमाडौँ, मंसिर ९ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘उपचारका अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस्’ भन्ने
उमेर ३० वर्ष नाघ्यो ? ध्यान दिनुहोस् मिर्गौला फेल हुनसक्छ
काठमाडौं, मंसिर ८ जलवायु परिवर्तन र हाम्रो खानपानले वर्षेनि नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ
पाल्पा, २६ कात्तिक रोग पहिचान नगरी शल्यक्रिया गर्दा गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका–८ की १७ वर्षीया लक्ष्मी